Telo taona lasa izay no vita ny divaorsako fa mbola tsy nanambady fanindroany aho. Nisy lehilahy roa ihany anefa efa niaraka tamiko.
Ny anankiray efa saika haka vady ahy mihitsy fa izaho no ohatry ny tsy mbola vonona. Amin’izao kosa, efa te hanambady indray aho. Ahoana no fomba hiatrehana izany fiainana vaovao izany ?
Somary zokiko lavidavitra ny lehilahy miaraka amiko. Tsoriko fa tsy tia azy aho,
fa toa sangisangy fotsiny no niarahanay. Noheveriko fa mivazivazy toa ahy izy, hay lasa tia be. Tsy te handratra ny fony aho ka mba toroy hevitra.
Vehivavy aho no manoratra. Manana olon-tiana aho,
efa niaraka ela izahay, nefa izy tratrako nampirafy. Nilaza taminy aho hoe : andao isika hisaraka nefa tsy mety izy. Inona no ataoko ?
Ahoana kay no tena ahazoana antoka fa tena tia ilay olona miaraka aminao ?
Raha ny tokony ho izy, avy hatrany dia tsapa izany fitiavana izany, fa tsy ilàna porofo fanampiny.
Nilaza tamiko ny vadiko hoe, tsy mba te hiray ara-nofo aminy mihitsy satria aho tsy mba mangataka izany mihitsy.
Tsy hitako izay atao ? Izaho mantsy toa tsy zatra an’izany sady tsy sahy koa fa menatra be.
Nilaza tamiko ny vadiko fa niteraka tamin’ny vehivavy hafa.
Maty anefa io vehivavy io, volana vitsivitsy izao, ka tsy misy mitaiza ilay bandikely 3 taona. Marary be ny foko, tsy hitako izay atao.
Ny ankizy latsaky ny 18 taona dia heverina foana fa iharan’ny herisetra ara-nofo, rehefa niray ara-hofo tamin-dehilahy, na tamin’ny sitrapony, na naolana. Heverina mantsy fa mbola tsy tena tompon-tsafidy ny amin’ny firosoana amin’izany izy, fa mety mbola azo rebirebena. Araka izany, raha hitory ianao dia tena afaka milaza tsara mihitsy fa nanodinkodina zaza tsy ampy taona sy nahabevohoka azy io lehilahy io. Raha ny ara-piarahamonina kosa anefa no jerena, dia tsy hita loatra izay tena antony hitoriana azy, satria izy tsy manary ny zanakao fa vonona ny hiara-hizaka ilay zaza aminy. Sao ny fitoriana azy no vao mainka hanimba ny fifandraisana aminy, nefa ilaina ny fanohanany ilay zanakao sy ny zanaky ny zanakao, izay tsy hoverin’ny tsy ho zanak’ilay lehilahy. Raha manahy ianao dia azo atao ny mampanao taratasy azy any amin’ny fokontany, ohatra, na eny anivon’ireny CECJ ireny.
50 taona aho, 27 taona no nanambadiako. Miaraka amina lehilahy 30 anefa aho izao, izay mpiara-miasa amiko ihany. Efa 5 volana izao izahay no niaraka ary miraiki-po aminy aho. Te hisaraka anefa aho satria “par intérêt” fotsiny no iarahany amiko. Tsy hitako izay atao.
Efa manana antony goavana iray lehibe ianao hisarahana aminy. Fantatrao tsinona fa tsy tena fitiavana ny azy fa misy ambadika. Tsy misy mihitsy ny tokony hampisalasala anao intsony. Mila mandresy lahatra ny tenanao fotsiny ianao, fa tsy mety ny iarahanao aminy, satria fitia tsy mifamaly ny anareo. Matoa ianao mbola tsy mety tafasarak,a dia satria mbola manantena zavatra any aminy ihany ary mbola tsy resy lahatra fa ilainao sy mety aminareo ny misaraka.
Saro-piaro be amin’ny vadiko aho nefa izy mbola tsy hitako nanao sipa mihitsy. Efa hatramin’ny voalohany aho no toy izany, te hiova nefa tsy mety.
Ny olona saro-piaro, amin’ny ankapobeny, dia tsy matoky tena loatra ary tsy matoky ny olon-tiany koa. Tsy misy olona tsy saro-piaro amin’ny olona, na amin’ny zavatra tiany, saingy rehefa tafahoatra ilay hasarota-piaro dia lasa toy ny fonja, na ho an’ilay manao azy na ho an’ilay iharany. Lasa te hitroatra be, hiala amin’ilay fangejana azy ilay olon-tianao, ianao kosa lasa tsy miaina intsony fa miasa saina lava. Ho rava ny tokantranonareo raha izany no mitohy. Efa tsapanao fa mila fiovana ianao, efa zava-dehibe izany. Eto dia mila manana finiavana ianao hanome fahatokisana bebe kokoa ny vadinao, fa indrindra koa, hanome lanja ny tenanao. Manokàna mihitsy fotoana andinihanao tena, ka itadiavanao ireo tsara rehetra any aminao, na toetra, na endrika ivelany… Tsy fahotana akory ny midoka tena, rehefa tena mitombina ilay doka. Ireny tsara any aminao ireny no itiavany anao, izay atao masaka an-tsaina dia hitombo tsikelikely ny fitokisanao tena ary hihena tsikelikely koa ny hasarota-piaronao.